monopamous နှင့် promiscuous voles ၏ medial prefrontal cortex အတွက် binding dopamine, oxytocin နှင့် vasopressin အဲဒီ receptor - သင့် ဦး နှောက် On Porn
neuroscience လက်တ။ 2006 ဖေဖော်ဝါရီ 13; 394 (2): 146-51 ။ EPub 2005 နိုဝင်ဘာ9။
Smeltzer MD1, Curtis JT, Aragona BJ, ဝမ် Z ကို.
monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အကြားနှိုင်းယှဉ်လူမှုရေး attachment ကိုအခြေခံ neurobiological ယန္တရားများဆန်းစစ်အတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်, နှင့် medial prefrontal cortex (mPFC) ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်။
Dopamine (DA), oxytocin (OT) နှင့်မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin (AVP) အားလုံး monogamous voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ dopamine: D (1) ဆနျးစစျဖို့ radiolabeled ligands ကိုအသုံးပြု - နဲ့ D (2) -like, ညီလေးနှင့် AVP V ကို (1a) အဲဒီ receptor monogamous နှင့်ကရာ voles ၏ mPFC အတွက်ထု binding ။
မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, monogamous voles: D (2) -like မြင့်မားထုခဲ့ရပြီး OT အဲဒီ receptor binding နှင့်အနိမ့်: D (1) -like ၏သိပ်သည်းဆ V ကို (1a) အဲဒီ receptor ကရာ voles လုပ်ခဲ့တယ်ထက် binding ။
လိင်ကွဲပြားမှုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်; အမျိုးသမီးညီလေးအဲဒီ receptor ၏မြင့်မားထု binding ပေမယ့် V ကို (1a) အဲဒီ receptor ၏အောက်ပိုင်းထုနှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အတွက်ယောက်ျားလုပ်ခဲ့တယ်ထက် binding ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဲဒီ receptor ၏ laminar ဖြန့်ဖြူး binding လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် mPFC အတွက် DA နှင့် OT စနစ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြသည်။ : D (1) တွင်ကွာခြားချက်များ - မျိုးစိတ်အကြား binding အဲဒီ receptor -like နှင့် D ကို (2) သူတို့ကနျူကလိယ accumbens (NACC) တွင် cortical လှုပ်ရှားမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲ DA လွှတ်ပေးရန် modulate စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းများထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။